डा. नारायण खड्काको चुनौतीः “शेरबहादुजीभन्दा अरु उम्मेदवार कति स्वस्थ हुनुहुन्छ ?” - मधेश प्रदेश डटकम
December 13, 2021 | 56 पटक हेरीएकाे
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्रका वरिष्ठ, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएको नेता भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता डा. खड्काले भने, “नेपाली कांग्रेसमा खुला प्रतिस्पर्धा छ । ९१ वर्षकी नेता पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । राजनीतिमा उमेरको के हदबन्दी ? उमेर त संख्या मात्र हो । मुख्य कुरा स्वस्थ हुनुपर्यो । अमेरिकामा ४२ वर्षका पनि राष्ट्रपति भए, ७७ वर्षका जो बाइडेन पनि राष्ट्रपति छन् । कल्याण गुरुङबाहेक सभापतिका अरु सबै उम्मेदवार ७० को हाराहारीमा छन् । मेरो प्रश्न छ, उहाँहरु शेरबहादुरजीभन्दा कति स्वस्थ हुनुहुुन्छ ?”
उनले थपे,” नेपाली कांग्रेसको सभापति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पत्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ । शेरबहादुरजी जो बाइडेनले समिट फर डेमोक्रेसीमा निम्त्याएका व्यक्ति हो । बोरिस जोन्सनले ब्रेकफास्ट मिटिङले गरेको नेता हो । यस्तो कुराको गहिराइ बुझ्न सकेनौं भने चुनाव जितेर मात्र के हुन्छ ?”
प्राविधिक रुपमा जिते पनि सर्वस्वीकार्यता ठूलो कुरा रहेको डा. खड्काले औंल्याए । उनले भने, “संख्याका कारण प्राविधिक रुपमा कसैले जित्ला । तर सर्वस्वीकार्यता हुन्छ कि हुँदैन ? मुख्य प्रश्न यो हो । कांग्रेसलाई अनुभव, वरिष्ठता, सरकार र पार्टी सञ्चालनको अनुभव भएको नेताको आवश्यकता छ । कहिल्यै पदमा नबसेका, निर्वाचन नजितेका मानिस कसरी पार्टी सभापति या पदाधिकारी हुन सक्छन् ? संख्यामा जित्नु एउटा कुरा हो, मन जित्नु अर्कै कुरा हो ।”
चुनाव हारेका मानिसले बहुमतको सरकार बनाउने फूर्ति गर्न नमिल्ने उनले बताए । उनले भने, “पार्टीको महाधिवेशन भनेको जनमत लिएर सरकार बनाउनका लागि ऊर्जा नवीकरण गर्नु हो । जसले चुनाव जितेकै छैन, उसलाई बहुमतको सरकार बनाउँछु भन्ने के नैतिकता हुन्छ ? जो आफै हारेको छ, म पार्टीलाई जिताउँछु भन्नु पार्टी पद्धतिमा नमिल्दो कुरा हो । पार्टी सभापति ठूलो कुरा होइन, सरकार बनाउनु ठूलो कुरा हो । पार्टीका साथीहरुलाई सधैं भ्रम र भूलभुलैयामा राख्न सकिँदैन ।”
डा. खड्काले पार्टीमा काम गर्ने स्थिति बनाउने हो भने देउवाको प्यानलले नै जित्नुपर्ने बताए । उनले भने, “मलाई लाग्छ, यसपालि पनि मिक्स टिम आउँछ । तर विधानमा भएको त्रुटिका कारण फेरि पनि सभापतिले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ । फेरि भागबन्डा गर्नुपर्छ । गत चुनावमा ४० प्रतिशत नभईकन टिकट बाँडिएन । जिम्मेवारी विभाजित छ, उत्तरदायित्व एउटाले मात्र लिनुपर्ने ? सभापतिलाई मात्र टिकट बाँड्ने जिम्मेवारी दिएको भए पो राजीनामा गराउन सकिन्थ्यो । यसरी पार्टीलाई जोगाउन मुस्किल पर्छ ।”
पार्टी सभापतिले काम गर्न सक्ने विधान नभएको उनले बताए । उनले भने, “१३, १४ जना पदाधिकारी छन् । प्रत्येकलाई कोठा, सजावट र सुविधा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? अर्को प्यानलबाट जित्नेले अध्यक्षलाई टेर्छ ? हावै हावामा तासमा बाजी मारेजस्तो विधानले काम गर्दैन ।” उनले ‘एक व्यक्ति एक पद’ कांग्रेसमा लागू नहुने बीपी र मातृका, किसुनजी र गिरिजाबाबुका खटपटले देखाइसकेको पनि बताए । उनले
आफूले बाहिर बसेर वैचारिक बहस चलाउन केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी नदिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “के भृकुटीमण्डपमा पौने सवा सय मानिस बोकेर हिँड्दा मात्र नेता भइन्छ ? त्यहाँ फ्याँकिएका कार्ड, ब्यानरलाई पैसामा रुपान्तरण गर्यो कति होला ? कहाँ छ समाजवाद ? उत्ताउलो कुरा गरेर जो जिते पनि भावनात्मक एकता र सम्मान गर्न सकिँदैन । सहृदयता, सरलता र सबैको सम्मान पाउने मान्छे पो नेता हुन्छ ।” कांग्रेसलाई एकल सभापतीय पद्धतिमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मधेशी समुदायको छोरी डिआइजी बनिन्...
रौतहट, पुस २८ गते । पूजा सिंह मधेशका महिलाबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बनेकी छन् । केहि दिन अघि गृहमन्त्रालयले...
डा. नारायण खड्काको चुनौतीः “शेरबहादुजीभन्दा...
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्रका वरिष्ठ, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय...